Maxay tahay sababta Jaamac Deperani shaqa looga joojiyay ? Qore Wariye Siciid Soona. – Kismaayo24 News Agency
by Tifaftiraha K24 11th November 2015 020
Jaamac Daperaani waa Wariye madax bannaan oo ka tirsan tv-ga Somalichannel oo kamida kuwa afka Soomaliga ku hadla, waxaa bishan aan ku guda jirno ee November uu magaalada Garowe ka bilaabay dar-dargalinta Barnaamijka Deperani show oo lagu wareysto xubnaha siyaasiyiinta ee Somalida.
Siciid Cabdi Samatar Surcad oo ka tirsan Baarlamka Puntland ayaa kamid ahaa dadka lagu casuumay Barnaamijka waxaana wareysigaasi uu ka shifay xiriirka ka dhexeeya dawlada iyo Xildhibaanada, iyo Baarlamanka oo ka faa’idaystay lacagta cusub ee dawladu soo daabacaday, taasoo mushaarka looga kordhiyay.
Wasiirka Warfaafinat Puntland Maxamuud Xasan Soocade ayaa isna noqday qofka labaad ee ku xigay Xildhibaan Surcad ee isna lagu casuumay Barnaamijka Deperani Show, waxaana wasiirku uu qirtay inuu maamulka Khaatumo ku taageerayo hab qabiil, waxaana sidoo kale wasiirku iska difaaci waayay musuq-maasuq lagu eedeeyay wasaarada inta uu joogay oo la xiriiray is daba marinta tababaro warbaahinta Puntland ay heshay, kaasoo ay ka qaybgal xubno aan Wariyaal ahayn.
Warar ayaa sheegaya in wasiir Soocade uu canbaarayn kala kulmay dhanka dawlada,markii uu hawada galay Wareysigii laga qaaday, Kadibna uu go’aan saday inuu Wariye Deperaani ku amro inuu Tafatirka Barnaamijka Deperaani Show soo marsiiyo , waxaana arinkaasi ku gacansayray Jaamac Deperaani.
Sikastaba maanta ayaa warqad ka soo baxday Wasaarada Warfaafinta Puntland lagu sheegay in shaqadii laga joojiyay wariye Jaamac Deperaani, waxaana canbaareeyay xanibaadasi Wariyaashada Soomalida iyo qaybo kamida Shacabka oo u arka mid aan sharciga waafaqsanayn.
Qore: Wariye Siciid Soona.
Madaxweynaha Puntland oo Xariga ka jaray Daadejinta adeega Wadooyinka Puntland (Sawiro)
Dowladda Soomaaliya oo xaqiijisey dilka Masuulkii Shabaabka ahaa ee lagu magacaabi jirey Aadan Garaar.